Ahoana no fomba fiasa SEO ny rafitra fanaraha-maso?
Raha miezaka ny mitana ny raharaham-barotra amin'ny fikarohana eo an-toerana ianao, dia mety ho tafiditra amin'ny fomba fanao SEO eo an-toerana. Ny tompon'andraikitry ny orinasa eto an-toerana dia mahafantatra ny maha-zava-dehibe ny fahafahana manara-maso ny asan'ny orinasan-tserasera izay omen'i Google amin'ny sehatra samihafa (tanàna, tanàna, tanàna, tanàna) mifototra amin'ny toerana misy ny mpampiasa manao fikarohana.
Mampalahelo fa maro ny hevi-bala amin'ny fitaovana fitsikilovana ao an-toerana. Tsy afaka manara-maso ireo fizarana Google izy ireo, manara-maso ny fikarohana rehetra ilaina ary mampitaha ny fifaninanana fifaninanana. Noho izany, raha manontany tena ianao raha misy laharan-toerana ao amin'ny tranokalan-tserasera marina, dia tsia ny valiny. Maro ireo rafitra fitohanana an-dalam-pametrahana izay mametraka toerana misy ny orinasa mampiasa ny parameter UULE. Io mari-pamantarana io dia mifototra amin'ny code postal, fifandanjana marina, adiresy ara-batana ary endrika hafa. Ny mari-pamantarana miavaka izay mifototra amin'ireo toetra ireo dia milaza an'i Google hametraka ny toerana fikarohana mankany amin'io toerana io. Ity parameter ity dia manamafy ny fametrahana toerana efa napetraka omen'ny Google. Na izany aza, ny angon-drakitra izay manamarina ny tatitry ny rafitra sy ny data izay hahazoan'ny mpikaroka dia mety ho hafa tanteraka. Azonao hazavaina amin'ny fivoahana tsy tapaka ao amin'ny lozam-pikarohana fikarohana. Ankoatra izay, ny valiny farany dia miankina amin'ny isan'ireo singa marobe toy ny fotoana, toerana, fitaovana, navigateur ary ny tantaram-pikarohana. Noho izany, raha mikaroka ao amin'ny faritra iray ihany ny mpikaroka iray, amin'ny fotoana iray sy ny tranonkala iray ihany dia mety hahazo valiny mitovy izy. Na dia izany aza dia azo heverina fa tsy mitovy ny toe-javatra toy izany. Ny tahirin-drakitra momba ny laha-tahiry dia tsy miovaova isan-taona amin'ny sehatry ny mpikaroka.
Nahoana no sarobidy ny rafitra fitsikilovana SEO?
Maro ireo fitomboana sarobidy izay mitaky fandalinana. Azonao atao ny mijery ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitry ny dokam-barotra, ny fampitomboana ny fomba fijery toy izany, ny fivoarana, ny toro-lalana, ny isan'ny mpitsidika sy ny sisa.Noho izany, maro ireo orinasam-pandraharahana ao an-toerana no manohy manara-maso ny lozam-pifanerany mba hahazoana data sy tombontsoa sarobidy izay mendrika ny hahafantarana raha te-hanatsara ny fandraisana an-tserasera sy ny SEO ianao.
Ankoatra izany, ny fanaraha-maso ny fiovana amin'ny isam-bato dia mety hanampy amin'ny fanatsarana ny tranokalan'ny tranonkala sy mampiseho ny toerana tokony hanaovana fanitsiana sasany. Ary na dia tsy liana amin'ny tranokalanao SEO aza ianao, dia mendrika ny hahafantarana na ny toerana misy anao na ny habeny.
Raha toa ka misy toerana misy anao ny toerana misy anao, dia azonao atao ny manamarika ny fahasamihafana misy eo amin'ny toerana misy anao.
Tombontsoa iray hafa ahafahan'ny SEO manome ny rafitra fitsikilovana dia ny fanaraha-maso ny karazana. Isaky ny mandao ny fialan-tsasatrao ianao, dia mety ho hitanao ny antony mahatonga izany toe-javatra izany ary avy eo ahoana no ahafahanao manatsara izany.
Amin'ny fampiasana ny rafitra fitsikilovana eo an-toerana, dia mahazo fotoana hitadiavana teny izay mipetraka ao amin'ny mpikaroka ao an-toerana ianao ary mamantatra ireo fahafaha-manao fanatsaranao. Ankoatra izany, dia azonao atao ny manamarina ny fifaninanana mpifaninana aminao sy ny fikaroham-bidy ataon'izy ireo. Azonao atao ny manamarina hoe iza amin'ireo pejy ireo no manakaiky anao ary manao ny fampivoarana SEO amin'ny sehatra momba ny SEO Source .